तिथि मेरो पत्रु »6प्रश्न जोडे एक पत्रु रही अघि विचार गर्नु पर्छ
यो कल्पना: तपाईं फेला पार्यौं कि विशेष कसैले, र आफ्नो सम्बन्ध शानदार छ. आफ्नो महत्वपूर्ण अन्य छलांग लिने र आपसमा वचनबद्धताले सुझाव तर जब तपाईं के गर्छन्…घरपालुवा रही द्वारा? तपाईं त्यो नयाँ कुकुर या बिल्ली आफ्नो जीवन थप अघि, मन मा निम्न प्रश्नहरूको रहेर छलफल.
"हामी दुवै घरपालुवा चाहनुहुन्छ?"
आफ्नो जीवन मा एक पशु राख्दा इनामदायी र जीवन-पुष्टि अनुभव हुन सक्छ. यो पनि महंगा र समय खाने हुन सक्छ, संग ASPCA एक मध्यम आकारको कुकुर अनुमान को एक औसत खर्च गर्न सक्छन् $1,580 खाना लागि प्रति वर्ष, पशु चिकित्सक खर्च, र अन्य हेरविचार, एक बिरालो को एक औसत खर्च गर्न सक्छन् जबकि $1,035 प्रति वर्ष. घरपालुवा प्राप्त गर्ने निर्णय आपसी हुनुपर्छ, र तपाईं वास्तवमा एक कुकुर थप्न अघि लामो गर्नुपर्छ, बिल्ली, आफ्नो जीवन वा अन्य जनावर. आफ्नो महत्वपूर्ण अन्य घरपालुवा छ अनिच्छुक हुन सक्छ मनमा राख्नुहोस्; त्यसो हो भने, त्यसपछि उनको राय आदर र घर एक नयाँ पशु ल्याउन मा बन्द धारण विचार. तपाईं को या त पहिले नै घरपालुवा छ भने, एक निर्णय गर्दा तपाईं आफ्नो पशु आवश्यकता विचार गर्नुपर्छ.
"पत्रु कस्तो प्रकारको हाम्रो लागि सही छ?"
तपाईं एक लैब्राडोर संग पार्क मा शनिबार बिहान jogs चित्रण गर्दै भने, तर आफ्नो महत्वपूर्ण अन्य माछा संग एक विशाल ट्यांक मोजा को सोच छ, त्यसपछि के तपाईं दुवै चाहनुहुन्छ पशु कस्तो प्रकारको कुरा गर्न आवश्यकता. तपाईं वा तपाईंको महत्वपूर्ण अन्य छ कुनै पनि एलर्जी खातामा लिन, आफ्नो वर्तमान रहन ठाँउ को आकार, आफ्नो काम कार्यक्रम, र आर्थिक एक पाल्तु जनावर मा जब निर्णय. तपाईंले चाहेको पाल्तु जनावर को आकार छलफल गर्न यो मौका प्रयोग, पनि. एक ठूलो कुकुर सानो कुत्ता भन्दा बढी चुनौती र खर्च हुन सक्छ.
"कसरी धेरै जाते हामी चाहन्छौं, जे भए पनि?"
तपाईं र तपाईंको महत्वपूर्ण अन्य तपाईं चाहनुहुन्छ पशु को प्रकार मा सहमत हुन सक्छ जबकि, तपाईं पनि तपाईं चाहनुहुन्छ कसरी धेरै जाते मा सहमत आवश्यकता. प्रत्येक थप पाल्तु जनावर संग, आफ्नो जिम्मेवारी र लागत पनि वृद्धि हुनेछ जनावर हेरचाह संग सम्बन्धित. मन मा तपाईं हुन सक्छ कति पशुहरू को मामला मा लागू हुन सक्छन् कि कुनै पनि नियम र नियमहरू पालन, तपाईं एक भाडा मा हो विशेष गरी भने.
"पालतू कहाँ बस्नेछन्?"
केही युगल लागि, सँगै बस्ने थुप्रै कारणहरू लागि एक विकल्प छैन. तपाईं र तपाईंको महत्वपूर्ण अन्य सँगै बाँचिरहेका छैनौं भने, त्यसपछि तपाईं Fido वा शराबी बस्नेछन् जहाँ निर्णय गर्नुपर्छ. उदाहरणका लागि, तपाईं हप्तामै आफ्नो साथी घर मा आफ्नो पाल्तु जनावर राख्न तय गर्नेछ, तपाईं सप्ताह मा पाल्तु जनावर छ, जबकि? एक व्यवस्था निर्णय गर्दा, आफ्नो काम कार्यतालिकामा कारक र वर्तमान घर वा अपार्टमेन्ट.
"कसले पाल्तु जनावर हेरचाह लागि जिम्मेवार छ?"
तपाईं र तपाईंको महत्वपूर्ण अन्य नियमित विभाजित खर्च भने, त्यसपछि निर्णय moot हुन सक्छ पाल्तु जनावर हेरविचार लागि जिम्मेवार छ जसले. तथापि, तपाईं के भने सधैं समान रूप खर्च विभाजित छैन, वा तपाईं को एक अन्य भन्दा एकदम अधिक बनाउँछ भने, जो पशु बिल र पाल्तु जनावर खाना भुक्तानी गर्नुपर्छ निर्णय तपाईं आफ्नो महत्वपूर्ण अन्य संग हुनुपर्छ छलफलको तपाईं घर एक नयाँ बिरालो वा कुकुर ल्याउन अघि छ.
"हामी कहाँ एक पाल्तु जनावर पाउनुहुनेछ?"
तपाईं र तपाईंको पार्टनर पाल्तु जनावर को एक विशेष प्रकार रही मा सहमत हुन सक्छ. तर तपाईं कहाँ आफ्नो नयाँ कुकुर पाउनुहुनेछ, बिल्ली, वा लोखर्के? सायद तपाईं को एक एक स्टोर वा प्रजनन किनिएका जान्छन् बलियो भावना छ. त्यसो हो भने, तपाईं दुवै बोर्ड हुनुपर्छ र तपाईं एक जनावर पाउन सक्छौं जहाँ सन्दर्भमा सहमत.
आफ्नो प्रकार सन्दर्भमा अन्य महत्वपूर्ण र कति पशुहरू खुला छलफल राख्दा आफ्नो सम्बन्ध मा एक महत्वपूर्ण कदम हो. इमानदार हुन र एकअर्काको राय मोल गर्न सम्झना.
तपाईंको सपना नारी तिथि गर्न चाहनुहुन्छ? चींटियों सिक्नुहोस्
पत्रु एलर्जी र डेटिङ रह गर्न सक्छन्?